နံနက်စာဆန်းလေးတွေကို ၆၀၀ကျပ်ကစပြီး ရတဲ့ ဗိုလ်တထောင်က ဘိုဆန်ဆန်ဆိုင်လှလှလေး - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
နံနက်စာဆန်းလေးတွေကို ၆၀၀ကျပ်ကစပြီး ရတဲ့ ဗိုလ်တထောင်က ဘိုဆန်ဆန်ဆိုင်လှလှလေး
11 Jan 2018 . 3:50 PM
နံနက်စာကို ကြက်သားအဆီအနှစ်အပြည့် ကြက်သွန်ဆီချက်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ တောကြက်ဆီထမင်းလေး စားချင်သူများ၊
အကျရည်နိုင်နိုင်နှပ်ထားတဲ့ လဖက်ရည်ဆိမ့်ဆိမ့်လေး သောက်ချင်သူများ၊
အငွေ့တထောင်းထောင်း ပဲပြုတ်နိုင်းချင်း ကောက်ညှင်းငချိပ်ပေါင်းလေးနဲ့ အာဟာရဖြည့်ချင်သူများ၊
ခိုတောင်၊ နန်းကြီးသုပ် ကောင်းကောင်းစားချင်သူများ အတွက် မနက်စာကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့ ဘိုဆန်ဆန်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဗိုလ်တထောင်မှာ ရှိနေပါပြီ။
ဈေးနှုန်းလေးတွေက ၆၀၀၊ ၁၀၀၀ မှ စပြီး ဈေးသက်သာတဲ့အပြင် ပုံမှန်စားနေကျမနက်စာအပြင် ထူးထူးခြားခြား မန္တလေးအစားအစာလေးတွေပါ စုံစုံလင်လင်ရပါတယ်။ ထမင်းကြော်၊ ထမင်းပေါင်းတွေအပြင် သူ့ဆိုင်မှာပဲ ရတဲ့ ထူးထူးခြားခြားမီနူးလေးတွေကလည်းစားချင်စရာလေးပါ။
ဆိုင်နာမည်လေးက Four Tomatoes ပါ။လိပ်စာက ၄၈လမ်းထိပ်၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ မြေညီထပ် ဖြစ်ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီကနေ နေ့လည် ၂ နာရီထိက မနက်စာ၊ နေ့လည်စာတွေ ရပြီး ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိကို Western Foods လေးတွေ ရောင်းချတာပါ။
ဆိုင်ပုံစံလေးက အပြင်ဘက်မှာ ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ လှလှပပခင်းကျင်းထားပြီး အထဲမှာတော့ အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပုံစံလေး ရှင်းရှင်းလေးပြင်ထားပါတယ်။ အစားအသောက်ပြင်ဆင်မှု၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက် အကုန် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုက အမှတ်ပြည့်ပါပဲ။ အရသာရှိတဲ့အပြင် ဝန်ထမ်းလေးတွေ ဝန်ဆောင်မှုတော်တော်ကောင်းတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ရေကို ဝယ်သောက်စရာမလိုပဲ သံပုရာကွင်းလေးခပ်ထားတဲ့ Detox Water ကို ရောက်တာနဲ့ချပေးပြီး ကုန်သွားတိုင်းလာဖြည့်ပေးပါတယ်။ လမ်းမတန်းမှာဆိုတော့ ကားရပ်ရလည်းလွယ်ကူပါတယ်။
မနက်စာစားချိန်သွားခဲ့တာမို့ စားခဲ့တဲ့ထဲကအရသာတော်တော်ရှိလို့ မစားမဖြစ်စားစေချင်တာလေးတွေကတော့-
ကြက်သားကို နူးအိနေအောင် ဒိန်ချဉ်နဲ့နှပ်ထားပြီး ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူနဲ့နယ်၊ ဆီပူထိုး၊ အပြင်သားလေးကြွပ်ပြီဆိုမှ Oven ထဲထည့်ပေါင်းထားတာမို့ အသားက ရှယ်အရသာ နူးညံ့နေတာပါ။ ထမင်းကိုတော့ ကြက်သားကထွက်တဲ့ အဆီအနှစ်အရေခွံလေးတွေနဲ့ ဆီချက်နံ့မွှေးမွှေးလေးရအောင် နယ်ထားပြီး အပေါ်က ကြက်သားမွှလေးတွေဖြူးပေးထားလို့ ပုံမှန်ကြက်ဆီထမင်းတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေတဲ့ မြန်မာအရသာလေးရပြီး တော်တော်ကို စားကောင်းတာပါ။ သူနဲ့တွဲစားတဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ဂေါ်ဖီစပ်ထားတဲ့ အချဉ်လေးလည်း အတော်အစပ်ဟပ်တည့်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အမေနယ်ပေးတဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းလေးတောင် လွမ်းမိစေပါတယ်။ တစ်ပွဲမှ ၂၆၀၀ ကျပ်ပါ။
ကြက်ဥကို ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ မွှေးနေအောင် ပီဇာပုံစံလေးပေါင်းထားပေးတာပါ။ သုံးမြှောင့်အစိတ်လိုက်လေးတွေရောင်းပြီး တစ်စိတ်မှ ၆၀၀ ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။ ဆိမ့်သက်ပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ တစ်စိတ်နဲ့တောင် မဝအောင်ပါပဲ။
အသားတွေကို ဌာပနာထားတဲ့အစာလေး လတ်ဆတ်ပြီး အရသာရှိပါတယ်။ ကြော်ထားတာ အပြင်ခွံကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ ပုံမှန် ဖက်ထုပ်ကြော် အရသာလေးပါ။ သူက တစ်ပွဲမှာ ၅ ခုပါတာကို ၂၀၀၀ ကျပ်ပါ။
နောက် ကောက်ညှင်းငချိပ်ပေါင်းဆိုလည်း ကောင်ညှင်းအနေတော်လေးနဲ့ ပဲပြုတ်၊ နှမ်းထောင်းလေး အစုံနဲ့စားပျော်ပါတယ်။ တစ်ပွဲမှ ၈၅၀ ကျပ်ပါ။ လဖက်ရည်လေးလည်း သူ့နှပ်နည်းလေးနဲ့သူ အကျရည်ကောင်းမှန်း သောက်လိုက်တာနဲ့ သတိထားမိစေပါတယ်။ တစ်ခွက်မှ ၆၀၀ ကျပ်ပါ။ တခြား နေ့အလိုက်ရနိုင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း Special Breakfast Menu လေးတွေလည်း Blackboard ပေါ်မှာ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ အိမ်ချက်ဒန်ပေါက်လည်း ရပါသေးသတဲ့။
တကယ့်ကို တိတ်ဆိတ်ပြီး ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေတွေကို တည်ခင်းဧည့်ခံဖို့ အကောင်းဆုံးဆိုင်ပါ။
မနက်ခင်းဆိုတာ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်မို့ မနက်ခင်း နံနက်စာစားချိန်တည်းက စိတ်ကြည်လင်နေမှ တစ်နေကုန် အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အာရုံနောက်စရာတွေမရှိ၊ ဆူညံသံတွေမရှိတဲ့အပြင် အရသာကောင်းတဲ့ မနက်စာလေးကိုဇိမ်ကျကျ စားပြီး တစ်နေ့လုံးစာအတွက် Good day with good mood ဖြစ်ဖို့ ဗိုလ်တထောင်က Four Tomatoes ဆိုင်လေးကို တစ်ခေါက်လောက်သွားစားကြည့်ပါဦးလို့ အစားအသောက်ချစ်သူတွေအတွက် Akhayar မှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲ…ကိုယ့်သူငယ်ချင်း Breakfast Monster တွေကို mention ခေါ်ပေးလိုက်ပါဦးနော်။
FoodieEi ( Akhayar )
နံနကျစာဆနျးလေးတှကေို ၆၀၀ကပျြကစပွီး ရတဲ့ ဗိုလျတထောငျက ဘိုဆနျဆနျ နံနကျစာဆိုငျလှလှလေး
နံနကျစာကို ကွကျသားအဆီအနှဈအပွညျ့ ကွကျသှနျဆီခကျြနံ့သငျးသငျးလေးနဲ့ တောကွကျဆီထမငျးလေး စားခငျြသူမြား၊
အကရြညျနိုငျနိုငျနှပျထားတဲ့ လဖကျရညျဆိမျ့ဆိမျ့လေး သောကျခငျြသူမြား၊
အငှတေ့ထောငျးထောငျး ပဲပွုတျနိုငျးခငျြး ကောကျညှငျးငခြိပျပေါငျးလေးနဲ့ အာဟာရဖွညျ့ခငျြသူမြား၊
ခိုတောငျ၊ နနျးကွီးသုပျ ကောငျးကောငျးစားခငျြသူမြား အတှကျ မနကျစာကောငျးကောငျးရနိုငျတဲ့ ဘိုဆနျဆနျဆိုငျလေးတဈဆိုငျ ဗိုလျတထောငျမှာ ရှိနပေါပွီ။
ဈေးနှုနျးလေးတှကေ ၆၀၀၊ ၁၀၀၀ မှ စပွီး ဈေးသကျသာတဲ့အပွငျ ပုံမှနျစားနကေမြနကျစာအပွငျ ထူးထူးခွားခွား မန်တလေးအစားအစာလေးတှပေါ စုံစုံလငျလငျရပါတယျ။ ထမငျးကွျော၊ ထမငျးပေါငျးတှအေပွငျ သူ့ဆိုငျမှာပဲ ရတဲ့ ထူးထူးခွားခွားမီနူးလေးတှကေလညျးစားခငျြစရာလေးပါ။
ဆိုငျနာမညျလေးက Four Tomatoes ပါ။လိပျစာက ၄၈လမျးထိပျ၊မဟာဗန်ဓုလလမျးပျေါ၊ ဗိုလျမွတျထှနျးတာဝါ မွညေီထပျ ဖွဈပါတယျ။ မနကျ ၇ နာရီကနေ နလေ့ညျ ၂ နာရီထိက မနကျစာ၊ နလေ့ညျစာတှေ ရပွီး ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိကို Western Foods လေးတှေ ရောငျးခတြာပါ။
ဆိုငျပုံစံလေးက အပွငျဘကျမှာ ပနျးအိုးလေးတှနေဲ့ လှလှပပခငျးကငျြးထားပွီး အထဲမှာတော့ အဆငျ့တနျးမွငျ့တဲ့ပုံစံလေး ရှငျးရှငျးလေးပွငျထားပါတယျ။ အစားအသောကျပွငျဆငျမှု၊ ပနျးကနျခှကျယောကျ အကုနျ သနျ့ရှငျးသပျရပျမှုက အမှတျပွညျ့ပါပဲ။ အရသာရှိတဲ့အပွငျ ဝနျထမျးလေးတှေ ဝနျဆောငျမှုတျောတျောကောငျးတာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ရကေို ဝယျသောကျစရာမလိုပဲ သံပုရာကှငျးလေးခပျထားတဲ့ Detox Water ကို ရောကျတာနဲ့ခပြေးပွီး ကုနျသှားတိုငျးလာဖွညျ့ပေးပါတယျ။ လမျးမတနျးမှာဆိုတော့ ကားရပျရလညျးလှယျကူပါတယျ။
မနကျစာစားခြိနျသှားခဲ့တာမို့ စားခဲ့တဲ့ထဲကအရသာတျောတျောရှိလို့ မစားမဖွဈစားစခေငျြတာလေးတှကေတော့-
ကွကျသားကို နူးအိနအေောငျ ဒိနျခဉျြနဲ့နှပျထားပွီး ဂငျြးကွကျသှနျဖွူနဲ့နယျ၊ ဆီပူထိုး၊ အပွငျသားလေးကွှပျပွီဆိုမှ Oven ထဲထညျ့ပေါငျးထားတာမို့ အသားက ရှယျအရသာ နူးညံ့နတောပါ။ ထမငျးကိုတော့ ကွကျသားကထှကျတဲ့ အဆီအနှဈအရခှေံလေးတှနေဲ့ ဆီခကျြနံ့မှေးမှေးလေးရအောငျ နယျထားပွီး အပျေါက ကွကျသားမှလေးတှဖွေူးပေးထားလို့ ပုံမှနျကွကျဆီထမငျးတှနေဲ့ ကှဲထှကျနတေဲ့ မွနျမာအရသာလေးရပွီး တျောတျောကို စားကောငျးတာပါ။ သူနဲ့တှဲစားတဲ့ ကွကျသှနျနီ၊ ပဲပငျပေါကျ၊ ဂျေါဖီစပျထားတဲ့ အခဉျြလေးလညျး အတျောအစပျဟပျတညျ့ပါတယျ။ ငယျငယျက အမနေယျပေးတဲ့ ထမငျးဆီဆမျးလေးတောငျ လှမျးမိစပေါတယျ။ တဈပှဲမှ ၂၆၀၀ ကပျြပါ။
ကွကျဥကို ကွကျသှနျနီ၊ ခရမျးခဉျြသီးလေးနဲ့ မှေးနအေောငျ ပီဇာပုံစံလေးပေါငျးထားပေးတာပါ။ သုံးမွှောငျ့အစိတျလိုကျလေးတှရေောငျးပွီး တဈစိတျမှ ၆၀၀ ကပျြပဲရှိပါတယျ။ ဆိမျ့သကျပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ တဈစိတျနဲ့တောငျ မဝအောငျပါပဲ။
အသားတှကေို ဌာပနာထားတဲ့အစာလေး လတျဆတျပွီး အရသာရှိပါတယျ။ ကွျောထားတာ အပွငျခှံကွှပျကွှပျလေးနဲ့ ပုံမှနျ ဖကျထုပျကွျော အရသာလေးပါ။ သူက တဈပှဲမှာ ၅ ခုပါတာကို ၂၀၀၀ ကပျြပါ။
နောကျ ကောကျညှငျးငခြိပျပေါငျးဆိုလညျး ကောငျညှငျးအနတေျောလေးနဲ့ ပဲပွုတျ၊ နှမျးထောငျးလေး အစုံနဲ့စားပြျောပါတယျ။ တဈပှဲမှ ၈၅၀ ကပျြပါ။ လဖကျရညျလေးလညျး သူ့နှပျနညျးလေးနဲ့သူ အကရြညျကောငျးမှနျး သောကျလိုကျတာနဲ့ သတိထားမိစပေါတယျ။ တဈခှကျမှ ၆၀၀ ကပျြပါ။ တခွား နအေ့လိုကျရနိုငျတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး Special Breakfast Menu လေးတှလေညျး Blackboard ပျေါမှာ ကွျောငွာထားပါတယျ။ အိမျခကျြဒနျပေါကျလညျး ရပါသေးသတဲ့။
တကယျ့ကို တိတျဆိတျပွီး ထိုငျလို့ကောငျးတဲ့ဆိုငျလေးပါ။ နိုငျငံခွားသားမိတျဆှတှေကေို တညျခငျးဧညျ့ခံဖို့ အကောငျးဆုံးဆိုငျပါ။
မနကျခငျးဆိုတာ နတေ့ဈနရေဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခြိနျမို့ မနကျခငျး နံနကျစာစားခြိနျတညျးက စိတျကွညျလငျနမှေ တဈနကေုနျ အဆငျပွပွေဖွေတျသနျးနိုငျမှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အာရုံနောကျစရာတှမေရှိ၊ ဆူညံသံတှမေရှိတဲ့အပွငျ အရသာကောငျးတဲ့ မနကျစာလေးကိုဇိမျကကြ စားပွီး တဈနလေုံ့းစာအတှကျ Good day with good mood ဖွဈဖို့ ဗိုလျတထောငျက Four Tomatoes ဆိုငျလေးကို တဈခေါကျလောကျသှားစားကွညျ့ပါဦးလို့ အစားအသောကျခဈြသူတှအေတှကျ Akhayar မှ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကဲ…ကိုယျ့သူငယျခငျြး Breakfast Monster တှကေို mention ချေါပေးလိုကျပါဦးနျော။
Black Shark2Gaming ဖုန်းကို March လ ၁၈ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်မယ်
by PhoneHayKo .2weeks ago
လုပ်ငန်း Meeting တိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီလား
Valentine’s Day မှာ ကောင်မလေးတွေ ဘယ်လိုအ၀တ်အစားတွေဝတ်သင့်လဲ
by Moethae Say . 1 month ago
အိန္ဒိယ Premium စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ Apple ကို ကျော်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့ OnePlus
ရန်ကုန်မှာ တစ်ကိုယ်ရည်သမားတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုများ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက မိန်းကလေးကိုရော စိတ်ဝင်စားရဲ့လား